Baydhabo: Atobiya oo Hub iyo Rasaas Gaysay Baydhabo – Rasaasa News
Dayuurado hub iyo rasaas wada oo gaadhay magaalada Baydhabo iyo waliba khilaaf xoogan oo gacan hadal wata oo ka dhacay shalay iyo maanta isla magaalada Baydhaba. War laga soo xigtay qaar ka mid ah baarlamaanka Somaliya, ayaa sheegay in Dayuurado wada hub iyo rasaas waday ay shalay gaadheen magaalada Baydhabo.
Magaalada Baydhabo, oo ay dhawaanba ka socdeen labo shir oo iska horjeeda oo lagu samaynayey maamulo leh tiro kala badan, ayuu khilaaf adag ka taagan yahay.
Gabalada koonfur galbeed Somaliya oo ay ciidamada Atobiya lug wayn ku leeyihiin amaankooda, waxaa haatan muuqta in dadka degaanku ka soo horjeedaan siyaasada Atobiya iyo wakiilkooda Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Shariif Xasan oo ka soo horjeeday dhismaha 6da gabal, wadayna dhismaha 3da gabal, ayaad moodaa in ay isu biirsadeen dawlada Somaliya iyo dadka reer Baydhaba.
Shariif Xasan oo tagitaankii Baydhaba lagala horyimd dagaal ayaa dag dag u helay hub iyo rasaas. Waxaana la sheegay in xalay uu la hoyday ciidamada Atobiya saakana hub u qaybiyey maleeshiyo beeshiisa ah, sidaasna waxaa sheegay Sheekh Aaden Madoobe oo ah xubin ka tirsan baarlamnka Somaliya.